2 Handle Igumbi lokuhlambela Sink Faucet Chrome
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukusasazeka kweeMpompo zegumbi lokuhlambela / Ukusasazeka kwe-2-Handle High-Arc yegumbi lokuhlambela kwi-Chrome
Imingxunya emi-3 iMoucet yeBathroom eNabileyo: umgama onokuhlengahlengiswa phakathi kwe-6'' – 16''; Ubungakanani bomngxuma: 32 – 38 mm/ 1.26 – 1.5'' (Plz jonga isayizi yetshonki yakho phambi kokuodola)
ISIQINISEKISO, INKXASO YOMTHENGI: Iwaranti yeminyaka emi-5 kunye nenkxaso yabathengi inikezelwa. Igutyungelwe kukubuya kweentsuku ezingama-90. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
Umgangatho wokuqala wento yaseklasini eqhelekileyo: itafile engaginyisiyo yentsimbi yokuhlambela ifenitshala 2321300C. Isiphelo se-Chrome siyakwazi ukumelana nokuvela. Ukutywinwa okuphezulu koqweqwe lwe-ceramic kunye neerator yokonga amanzi. Ukuphathwa kabini ukuseta ukuhamba okulula kunye nokulawula ubushushu bamanzi. (Nceda uhlole ubungakanani besinki ngaphambi koku-odola)
uyilo, uyakhawuleza uqhagamshele itekhnoloji: ulwakhiwo lokuqala olukhawulezayo lwesakhiwo silula ukufaka ngokwakho Gcina imibhobho yokufaka imibhobho ngombhobho weenkuni. Isithuba sinokuhlengahlengiswa ngokweemfuno zakho. Ukulunga ekuqeshweni kwekhaya, i-condominium entsha, igumbi elinye, ikhaya elihamba ngemoto, ikharavani yokuhamba kunye nokusetyenziswa kwasekhaya.
Ukulawula kabini ukuseta ukuhamba okulula kunye nokulawula ubushushu bamanzi. Ukulunga ekuqeshweni kwekhaya, i-condominium entsha, igumbi elinye, ikhaya elihamba ngemoto, ikharavani yokuhamba kunye nokusetyenziswa kwasekhaya.
I-SKU: 2321300C iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukusasazeka kweeMpompo zegumbi lokuhlambela tags: igumbi lokuntywila kwigumbi lokuhlambela, bamba banzi, Ichrome etyheliweyo
12.1 x 8.5 x 3.1 intshi